DP-World iyo Puntland:- Hadalkii Deni Siduu Usaameynayaa Hawlaha Shirkaddan ? | Gaaroodi News
June 16, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni
Madaxweynaha Puntland Siciid Candullaahi (Deni) ayaa sheegay in la joojiyey lacagihii laga qaadayay dekedda Boosaaso.
Lacagtaas waxaa uruurisa shirkad loo garanayo BNO oo hoos tagga shirkadda DP-World oo maamusha dekedda.
Madaxweyne Deni ayaa go’aankan kaga dhawaaqay furitaanka kal-fadhiga 48-aad ee baarlamaanka Puntland.
Hadalka Deni ayaa imanayo xilli ay jiraan dad weli ka walaacsan in aan shaqo laga bilaabin dekedda, oo ay shirkadda DP-World la wareegtay afar sano kahor.
Shirkadan DP-World waxaa laga leeyahay dalka Imaaraatka carabta. Waxayna sidoo kale, maamushaa dekedda magaalada Berbera ee Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
Siduu DP-World u saameynayaa go’aanka cusub?
Sida laga soo xigtay maamulka Puntland, qeybta lacagaha ee ka soo xarooda dekedda Boosaaso ayaa ka baxaya gacanta shirkaddan laga leeyahay imaaraatka, balse wuu sii soconayaa maamulkeeda iyo mashaariicda kale ee dekedda.
Warqad ka soo baxday Puntland, bishii November ee 2020-kii, waxaa ku xusan in lacagta dekedda ka soo xaroota ay ku dheceyso akoono ay dowladda maamusho.
Waxay ahaayeen kuwo ay shirkadda u lahayd galangal, balse hadda, waxaa la hakinayaa in DP-world ay lacag kala bixi karto akoonadaas, illaa arrimo la xallin doono.
Madaxweynaha Puntland ma uusan faafaahinin arrimaha lacagta ku saabsan ee la xallin doono ee sababay in hakadka laga geliyay heshiiskii shirkaddan ee qeybta maaliyadda.
Puntland iyo DP world maxay ku heshiiyeen?
In kastoo la qariyay inta badan waxa lagu heshiiyay, haddana waxaa jiray qeybo la shaaciyay.
Inta la bayaaniyay ee heshiiska wuxuu dhigayay in shirkaddan dekedaha ka shaqeysa ee laga leeyahay Imaaraatka Carabta, ay maamusho dekedda Boosaaso, muddo 30 sano ah sid dib u dhis iyo casriyeyn ay ugu sameyso.
Waa mashruuc uu ku baxayo kharash gaaraya $336 milyan oo dollar, sida ku xusnayd heshiiskii la shaaciyay ee la isla gaaray ee baarlamaanka Puntland na uu ansixiyay sannadkii 2017-kii.
Sidoo kale, heshiiskaas waxaa lagu sheegay in inta dhismaha uu socdo, DP World in ay dhiseyso deked yar oo macmal ah oo shaqada kusii kala socoto, illaa dekadda weyn ay diyaar noqoneyso.
Faa’idada uu heshiiska Puntland u leeyahay maxay tahay?
Siyaasiyiintii u ololeynayay heshiiskan waxay ku doodayeen in faa’idooyiin badan uu u yeelan doono dekedda Boosaaso.
Xildhibaan hore oo ka tirsanaa Baarlamaanka Puntland, kana mid ahaa kuwii ansixiyay heshiiska, Maxamed Shiike, wuxuu xilligaas BBC u sheegay in dekedda ay ka heleyso hormarin iyo ballaarin.
Wuxuu yiri: “Walaal faa’idadu wey iska caddahay. Dakadda Boosaaso, tani iyo marki uu dhacay dagaalki sokeeya ee Somaaliya 1991-kii, waxay ahayd mid u adeegta, Puntland ilaa gobolada dhexe ee Soomaaliya ilaa Galbeedka xuduudda Itoobiya dadka deggan. Inta uu burburka dhacayna wax lagu kordhiyey ma jirin.”
Khilaafkii DP-World iyo Dowladda federaalka?
Khilaafkii u dhexeeyay dowladda Imaaraatka carabta iyo Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa salka ku hayay heshiiyada iyo dhaqdhaqaaqyada shirkadda DP-World ay ka waday Somaliland iyo Puntland. Askeri ka mid ah ilaalada dekedda Boosaaso.
Waxay heshiisyo la kala saxiixatay Puntland iyo Jamhuuriyadda Iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. Waxayna sidaa ku heshay maamulka dekadaha Boosaaso iyo Berbera.
Balse, dowladda Soomaaliya waxay u arkeysay in shirkaddan ay “halis ku tahay dalka”, sida uu sheegay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad.
“Shirkada DP-World wey na xumeysay waxeyna khatar galisay madax-bannaanideenna iyo midnimada dhulkeena, walina faragalinteeda waa mid socota,” ayuu yiri Cawad oo sannad ka hor la hadlay telefishinka Alcarabiya.
Mowqifkaas dowladda Soomaaliya ayaa weli sidiisa ah, waxaana illaa iyo hadda jiro khilaaf u dheexey Soomaaliya iyo DP-World.
Sannadkii 2018-kii, Dawladda Soomaaliya ayaa u yeertay Safiirka Iimaaraadka Carabta u fadhiya Muqdisho, iyadoo ujeedada u yeeriddu la xiriirtay sidii qaab diblomaasiyadda waafaqsan ay Soomaaliya ugu gudbin lahayd mowqifkeeda ku aaddan arrinta shirkadda DP-World iyo dekedda Berbera.
Tallaabadaas ayaa daba socotay markii 12-kii bishii Maarso ee isla sannadkaas uu Baarlamaanka Soomaaliya gaashaanka ku dhuftay heshiis dhex maray shirkaddaas iyo maamulka Somaliland, kaas oo saamiga ugu badan ay Dekedda Berbera ku yeelanaysay DP-World, hallka Itoobiyana loo qoondeeyay 19%.
Dilka madixii DP-World ee dekadda Boosaaso
Paul Anthony Formosa, wuxuu ahaa madixii shirkadda DP-World ee dekedda Boosaaso, waxaana lagu dilay meel u dhow dekedda, bishii February ee 2019-kii.
Ninkii dilay ayaa isla goobta lagu dhaawacay oo lagu qabtay. Masuuliyadda dilkaas waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab.
Ninkaas wuxuu ka soo jeeday Jasiiradda Malta, wuxuuna si gaar ah u qaabilsanaa mashruuca dhismaha ee shirkad loo garanayo P&O Ports.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo si xanaaq ah uga hadlay dhacdadaas wuxuu yiri: “Waa dhaqan ay bariyahan oo dhan la beegsanayaayeen sidii ay umadda Puntland iyo Umadda Soomaaliyeed noolashooda oo dhan halis gelin lahaayeen”.
“Barnaamijkan lagu dilay Paul, ma ahan dil loo geystay shaqsi maamule ah oo keliya, balse wa dil loo geystay umadda Puntalnd oo loogu talagalay in lagu baab’iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda iyo sumacaddooda”, ayuu yidhi